AKHRI WARBIXIN: Maxaa sababay sare u kaca furiinka Soomaalida dalka Kenya? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta AKHRI WARBIXIN: Maxaa sababay sare u kaca furiinka Soomaalida dalka Kenya?
AKHRI WARBIXIN: Maxaa sababay sare u kaca furiinka Soomaalida dalka Kenya?
Qaar ka mid ah Hablaha Soomaaliyeed / Photo Credit: GETTY IMAGES
Nairobi (Halqaran.com) – Qaadiga Muslimiinta Kenya ayaa walaac ka muujiyay tirada sii kordheysa ee burburka qoysaska Islaamka ee dalkaas, gaar ahaan Soomaalida.
Xafiiska Qaadiga ayaa sheegay in sannadihii dambe ay sii kordheesay tirada qoysaska burburay dhowrkii sano ee la soo dhaafay.
Rashiid Cali Cumar oo ah ku xigeenka xafiiska Qaadiga ee Kenya ayaa BBC-da u sheegay in culeys uu soo foodsaaray guurka Soomaalida, isagoona intaa raaciyay in meelaha ugu badan ee lamaanayaasha ku nool ay kala tageen ay yihiin deegannaada ay ku badan yihiin Soomaalida.
“In guurkii uu burburay waa shay cad, maxaa yeelay maalintii ba haddii 15 kiis oo furitaan ah la geeyo maxkamadda Qaadiga iyadoo Wadankan uu leeyahay 50 Qaadi, waa arrin naxdin leh,” sidaas waxaa BBC-da u sheegay Rashiid Cali Cumar oo ka tirsan xafiiska Qaadiga ee Kenya.
Furiinka iyo Bulshada Muslimiinta Kenya
Xigasho: Xafiiska Qaadiga Kenya / Photo Credit: BBC
Sida uu Rashiid sheegay, magaalada Nairobi waa meesha ugu furiin badan. Sannadkii la soo dhaafay oo keliya waxaa laga diiwaan geliyay “700 oo furriin ah, taas oo ka badan sannadkii ka horeeyay oo ahaa 600, halka sannadkii kasii horeeyayna uu ahaa 400”. Waxay u muuaqtaa in tirada ay sii kordheyso, sannadba midka ka dambeeyay.
Dhanka Gobolka Waqooyi badan, waxaa sidoo kale ku sii “badanaya furiinka”.
ku xigeenka xafiiska Qaadiga ee Kenya wuxuu yiri: “Gaarisa ayaa ugu badan, Wajeer ayaana ku xigto, Magaalada Mandheera ayaana ugu dambeesay. Tirada Gaarisa waxay ahayd 450, Wajeer 300, halka Mandheera ay tahay 200 oo kiis furiin”.
Dumarka ayuu sheegay in boqolkiiba 95 ay yihiin kuwa dalbada furriinka ee yimaad maxakamadaha, wuxuuna intaa ku daray in dadkaas ay u badan yihin dhallinyaro isugu jira dumar iyo ragba.
Kororka furiinka Nairobi
Maxaa sababa burburka qoysaska?
Inta badan sababaha burburka qoysaska waxaa la ogaada xilliga ay dalbanayaan furriinka, waxaana waxyabaaha sababa waxaa ka mid ah “isla hadal la’aanta iyo burburka heshiiskii guriga”.
“Waxyaabaha kale ee sababa waxa kamid ah dhaqaalaha, balwad, ninka oo mudo dheer guriga isaga maqnaanayo iyo xuquuqdii caamka ahayd ee laga rabay ninka oo meesha ka baxady,” ayuu ku daray Rashiid Cali Cumar.
Xafiiska Qaadiga Kenya wxuu sidoo kale BBC u sheegay in “ragga qurbaha ka yimaada ay qeyb ka yihiin dhibaatada burburka qoysaska”.
Wuxuu sheegay in ay la yimaadaan “dhaqaale si ay fasaxooda ugu qaataan Kenya, dib dambana aysan ugu soo noqon gabadhii ay guursadeen” muddadii ay ku sugnaayeen Kenya.
Kororka furiinka Gaarisa
Xigasho: Xafiiska Qaadiga Kenya, Photo Credit: BBC
“Saddex bilood marka ay joogaan way iska tagayaan, taleefoonkana wuu dansanayaa, waxaadna arkeysa gabdha yaryar oo laga tegay, meel ay ninka u raadisana aysan jirin, taas na qeyb ayay ka noqotay dhibaatada wayna sii kordhisay”, ayuu yiri.
Xafiiska sare ee Qaadiga ama maxkamadda u banaaneyn wax tallaaba ah oo ay qaaddo, sida uu sheegay Rashiid balse “misaajidda ayey ka bixiyaan duruus iyo wacyigelin ku aadan arrintan iyo goobaha aroosyada” oo uu sheegay inay ka sharaxaan dhibaatada ay leedahay burburka qoys.
Kuxigeenka xafiiska Qaadiga Kenya ayaa sheegay in dad aan horay isu aqoon oo inta la isbaray si degdeg ahna la isugu guuriyay ay qeyb ka mid ah dhibaatadu tahay. “Dad aan marka hore isfahmin way adag tahay in ay noolal wadaagaan”.
Rashiid Cali Cumar wuxuu sheegay in mustaqbalka dhow la arki doono saameynta arrintan ka dhalata, haddii aan hadda waxba laga qaban.
Wuxuuna intaa raaciyay: “Maamulada Kenya looga baahan yahay inay sameeyaan tababar la xiriira noolasha qoyska oo dadka lagu fahamsiinayo dhibaatada ay leedahay burburka qoysaska”.
Maxaa sababay sare u kaca furiinka Soomaalida dalka Kenya